Abaninzi besikolo banqaba ukutya oko bakulungiselela esikolweni kwaye baqondwa. Abazali abakwazi ukulawula ukuba ngaba umntwana wayidla esikolweni okanye into ayidlayo. Indawo yokudla kwasekuseni iya kubakho isidlo sakusasa, apho umntwana uya kuthatha naye ekhaya. Ukuba, ngokwenza njalo, ucinga ngengqalelo yokukhetha komntwana, kuya kuba nesiqinisekiso sokuthi umntwana akayi kulamba kwaye isidlo sakusasa siza kudla ngesidlo.
Yintoni endimele ndiyinike umntwana wam esikolweni ngesidlo sakusasa?
Ukongezelela, ukuba umntwana uya ekhaya ekhaya isidlo sasekuseni esikolweni, kufuneka ekhaya atye isidlo sakusihlwa. Ukutya kwasekuseni akufanele kube ninzi. Kufuneka zibandakanye: i-cottage cheese, iphariji, iqanda elibilisiweyo kunye nobisi, itiye okanye isiphuzo sekhofi ngeesanti. Kodwa uya kuqinisekiswa ukuba, ukuba umntwana wakho uyadla, ngoko akayi kulamba ekupheleni kwesifundo sokuqala.
Kubaluleke kakhulu kwimizimba yomntwana ekhulayo ukuba abe nokutya okunokulinganisela. Ewe, awukwazi ukunika umntwana izidlo ezikhethekileyo, kodwa oku akuyimfuneko. Isidlo sasekuseni esikolweni kufuneka sitshise kwaye sithandeke. Kungcono ukumnika umntwana ngemifuno, ushizi okanye inyama, ii-pie, i sandwich, isiselo esishushu (i-cocoa okanye itiye) kwi-thermos.
Ukuze kube lula ukutya kwasekuseni kufakwe kwisitya seplastiki okanye ifilimu yokutya ukuze ingabonakalisi i-satchel okanye i-briefcase kwaye ayilahlekelwa yimo yayo. Umntwana akazange avume ukuthwala i-thermos kunye nesitya sokutya kwasekuseni, hamba kunye nomntwana kwaye uthenge, umntwana ngokwakhe uya kukhetha. Awudingi ukuba uye esitolo, unokutyelela ivenkile ye-intanethi uze ukhethe oko umntwana akuthandayo. Yena, ngokuqinisekileyo, uya kuvuyela ukuphathwa njengomntu omdala kwaye uya kuzivuma ngokuzithandela i-thermo kunye nesitya esikolweni.
Musa ukunika umntwana iilekese. Akayi kudla ii-pies okanye isantiwiches; uya kudla ukutya kwakhe nge-bar bar. Kucetyiswa ukuba unganikeli iimveliso ezinje zidliwa ngepuni, ngenxa yokuba umntwana angangcola, okanye alahle i-spoon phantsi, awukwazi ukuyilawula.
Ukuba unika imali emini, kufuneka ukhangele ukuba usebenzisa imali kwindawo ekuya kuyo. Yaye yenza okungaqhelekanga, fumana imenyu kwindawo yokudlela kwaye njengokungathi uyadlula kubuza umntwana wakho oko akuthengayo. Mhlawumbi uchitha imali kwimidlalo yekhompyutha kwaye ngexesha elifanayo uhamba elambile yonke imini.
Akukho mfuneko yokufuna ezininzi kwi-canteen yesikolo. Kodwa ekhaya umntwana kufuneka afumane isethi epheleleyo yezinto zokulandelela kunye neemaminerali, iivithamini, i-carbohydrates, amafutha, iiprotheni, ukufumana ukutya okunokulinganisela, konke oku kuyimfuneko yophuhliso oluhle kunye nokukhula komntwana. Ukutya okunokulinganisela kufuneka kufake iimveliso zobisi, isinkwa esipheleleyo seentlanzi, intlanzi, iinkukhu eziphantsi kweenkukhu kunye nenyama, ininzi yeziqhamo kunye nemifuno. I-confectionery kunye neesekese zilungele ukukhuphela okanye ukunciphisa.
Uhlalutya kwisixhobo somntwana kwi-kindergarten
Imincintiswano kaFebhuwari 23 esikolweni nakwiklasi - imidlalo ehlekisayo, ehlekisayo, ehlekisayo kunye neyokudala ngokuhlonipha uMkhosi we-Defender we-Fatherland Day
Inyosi ihamba nge imbewu yepilisi kunye nepoppy
Isidlo esivela kwii-pean
Iseluleko esiluncedo xa ungamcaphukisa umntu oyintanda
Izifo kwiengulube zeginea
Izifo eziqhelekileyo zendlebe phakathi kwabantu
Umtshato kwindlela yaseVenice
Ubomi besondo kunye nendoda
Burger ngegusha, ikhukhamba kunye ne-sauce
I-Pie Poppy Seed Bundt III
Isobho kunye neklabishi
Iimpawu zokusondeza izandla ukusetyenziswa kwekhaya
Unokuyeka njani ngokuxhomekeka kwintando yendoda?
Indlela yokudweba intsapho-nge-nyathelo: Iiklasi zezifundo kunye nesithombe somntwana kunye nabaculi beeveli
Indlela yokukhangela imali kunye nendlela yokufunda indlela yokugcina imali